Waa maxay noodhadhku? - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Waa maxay noodhadhku?
Tag: Xudunta Bitcoin, Blockchain, macmiil fudud, dhamaadka barta isgaarsiinta, laba-kharash garayn, Noodhadh buuxa, noodhadh ansax ah oo buuxa, awood xoog leh, Qaybaha dhageysiga, Macdanta Bitcoin, Guntin, barkad qodayaal, macdan qode barkad buuxa, Xaqiijinta Bixinta Lacagta (SPV), kaliya macdanta, meel aad u fiican
Noodhku wuxuu leeyahay macne ka duwan qaabkiisa.
Adduunyada shabakadaha, shabakadaha isgaarsiinta ama xitaa kumbuyuutarrada, noodhadhku waxay leeyihiin astaamo si wanaagsan loo qeexay: waxay noqon karaan barta dib-u-qaybinta ama dhammaadka xiriirka. Waxaan dhihi karnaa guud ahaan taas node waa qalab shabakad jireed ah. Si aan loo seegin wax, si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira kiisas gaar ah oo ay lagama maarmaan u tahay in la isticmaalo node daldalool.
Cazoo, ka hadal cabitaanka!
Way fiicantahay. Node network waa barta farriinta lagu abuuri karo, lagu qaadan karo ama lagu gudbin karo. Sidaan horeyba u soo sheegnay, waxaa jira noocyo kala duwan oo ah Noodhadhka Bitcoin: noodhadh buuxa, noodhadh super, node node iyo macaamiisha SPV
Qaybaha Dhageysiga (Noodhadhka Super)
Macaamiil khafiifa ama SPV
Macaamiisha vs Noodhadhka Macdanta
Halka Blockchain loogu talagalay nidaam ahaan qaybiyey.
I qanjidhada xannibaadda Sidaa darteed waa inay u dhaqmaan sidii barta isgaarsiinta oo waa inay awoodaan inay lahaadaan waxyaabo qaar, si ay u qabtaan shaqooyinka qaarkood. Qalab kasta kaas oo ku xiraya isku xirnaanta Bitcoin, sida kumbuyuutarka, waxaa loo qaadan karaa gunti, Maaddaama dhammaan noodhadhku ku xiran yihiin xannibaadda. Maxay guntimahaani qaban karaan? Waxay la xiriiraan. Waxay u gudbiyaan macluumaadka ku saabsan macaamil ganacsi iyo baloogyada shabakaddeeda kombuyuutarka loo qaybiyey ee leh borotokoolka asxaabta-u-dhigga ee Bitcoin. Isha: waxaa jira noocyo kala duwan oo ah noodhadhka Seeraar.
Noodhadh buuxa waa noodhadhka si buuxda u siiya amniga Bitcoin isla markaana taageera qaab-dhismeedkiisa: waxay muhiim u yihiin shaqada shabakadda oo dhan. Waxaa laga yaabaa inaad horeyba ugu akhriday meel oo aad aragtay iyaga oo loo yeedhay noodhadh ansax ah oo buuxa: waxay ugu yeeraan taas sababtoo ah kaqeybqaado nidaamka hubinta macaamillada iyo qufulada sida ku xusan xeerarka lagu soo rogay ogolaansho ee nidaamka. Noodhadh buuxa waxay u gudbin karaan macaamilo cusub iyo baloogyo cusub xannibista.
Caadi ahaan noodh buuxa waa inuu soo dejiyaa nuqul ka mid ah dhammaan xannibaadda, oo leh dhammaan baloogyadeeda iyo macaamilkeeda (xitaa haddii aysan ahayn shuruud lagama maarmaan u ah in loo tixgeliyo noodh buuxa - xitaa hal qayb oo ka mid ah xannibaadda ayaa la soo dejin karaa).
Boodh buuxa oo Bitcoin ah ayaa la dejin karaa iyadoo la raacayo hirgelinta barnaamijyo badan oo kala duwan, halkaasoo ugu caansan dhammaan loo yaqaan Seeraar Core (halkan waa isku xirkiisa). Maahan qof walba! Waa kuwan kuwa ugu yar, laakiin ugu yar, shuruudaha ugu yar si ay u noqdaan Seeraar buuxa Bitcoin Core:
Desktop ama laptop oo leh nooc dhowaan ah Windows, Mac OS X, ama Linux.
200GB oo ah meel disk bilaash ah.
2GB xasuusta (RAM).
Xidhiidhka internetka xawaaraha sare leh oo la soo dejinayo ugu yaraan 50 kB / s.
Xidhiidh aan xadidnayn ama xadad xadidan oo xaddidan leh. Ama hubi in qorshahaaga canshuuraha, haddii aad sameysid goobo kulul, 200 giga bishiiba ay ku jiraan soo dejinta iyo 20 soo dejinta.
Noodhka buuxa waa inuu awood u leeyahay inuu shaqeeyo ugu yaraan rubuc maalinta (6 saacadood) laakiin aad ayaa loogu qanacsan yahay inay had iyo jeer firfircoon tahay, 24 saacadood maalintii.
Kumaan kun oo mutadawiciin kala duwan ah iyo xitaa ururo ayaa si adag u shaqeynaya si ay u noqdaan noodhadh buuxa oo markaa awood u yeeshaan inay ka caawiyaan nidaamka deegaanka ee Bitcoin. Laga bilaabo maanta (Maajo 2021) waan xisaabinaynaa 9615 noodhadh dadweyne oo firfircoon shabakadda Bitcoin. Waxaan kaliya ka hadleynaa noodhadhka dadweynaha, taas oo ah, noodhadhka Bitcoin ee muuqda oo la heli karo - oo sidoo kale loo yaqaan dhageysiga nodeyaasha.
Soo-koobidda noodhadhka dadweynaha ee shabakadda Bitcoin
Haa Sherlock, waxaa sidoo kale jira qanjidhada aan dhagaysan, guntiro qarsoon oo aan muuqan. Kuwani waxay ku gabbanayaan gadaasha dambe si ay u shaqeeyaan, iyagoo adeegsanaya hab maamuusyada asturnaanta sida Tor, ama, xitaa ka fudud oo ka ammaan badan, looma qorsheyn inay helaan xiriiryo.
Un dhageysiga node o meel aad u fiican waa goob buuxda oo muuqata oo guud laga arki karo: waxay la xiriirtaa noodhadh kale oo doonaya inay la hadlaan waxayna is dhaafsadaan macluumaadka. Markaa loo isticmaalay super node waa labadaba a buundada isgaarsiinta Che il xog ah: super node waa a barta qaybinta.
Haddii aad rabto inaad noqoto noodhadh lagu kalsoonaan karo, waa inaad had iyo jeer firfircoon tahay, 24 saacadood maalintii, si aad ugu gudbin karto daadka isku xirnaanta: taariikhda xannibaadda waa in la diiwaangeliyo, dhammaan macaamillada waa in lagu diiwaangeliyaa xogtooda dhammaan nodeyaasha adduunka oo dhan. Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in xitaa dadka yar ay tahay: awoodda xisaabinta loo baahan yahay, iyo sidoo kale xiriir internet oo wanaagsan, ayaa loo baahan yahay.
Waqtigii macdanta ayaa la dhaafay. Ha bilaabin wiiqista. Maanta, si looga qaybqaato tartan ku saabsan geeddi-socodka macdanta Seeraar, waxaa lagama maarmaan ah in la maal-galiyo barnaamijyo khaas ah iyo qalab, kaas oo si isku mid ah ula socda Seeraar Core si loo isku dayo miino-saarista. Macdan qodayaal, ama qof adeegsada kombiyuutaradaan awooda badan, ayaa go'aansan kara inuu kaligiis shaqeeyo (kaliya macdanta) ama kooxo (barkad qodayaal).
Inta yeeyda kaligood ah, macdan qodayaasha kaliya ee weydiistey ayeeydood inay awoodaan inay isticmaalaan maqsin mudo ah si ay wax ugu qabtaan kombuyuutaro, halka ay adeegsanayaan nuqul kooda maxaliga ah ee laga soo dejiyey xannibista, kuwa wax ku qoda barkadaha, barkadaha dabaasha macdan qodayaasha, sifiican ayey uwada shaqeeyaan si wada jir ah, mid walbana wuxuu ku deeqayaa ilaha u gaarka ah (awood xoog leh). Barkadda wax lagu qodayo waxaa keliya mas'uul ka ah maareeyaha barkadda inuu ilaaliyo noodh buuxa: isagu waa a macdan qode barkad buuxa.
Sidoo kale loo yaqaan macaamiisha, Macaamiisha macaamiisha ah ee loo yaqaan 'Simplified Payment Verification (SPV)' miisaan yar waxay adeegsadaan shabakadda Bitcoin laakiin uma dhaqmaan sidii noodh buuxa. Macaamiisha SPV sidaas darteed kuma biiriyaan amniga shabakadda: looma baahna inay haystaan ​​nuqul ka mid ah xannibaadda, waligoodna lama weydiisto xaqiijinta macaamilka iyo habka ansaxinta.
Macaamiisha SPV waxay leedahay hawl aasaasi ah: waxay u oggolaaneysaa isticmaale kasta inuu hubiyo bal in macaamillada qaarkood lagu daray baloog iyo in kale, iyadoon la soo dejisan dhammaan xogta baloogga. Sidee bay u sameeyaan? Waxay ka codsadaan macluumaad qaar noodhadh buuxa oo buuxa (noodhadhka super). Macaamiisha khafiifka ahi waxay u dhaqmaan sidii dhamaadka barta isgaarsiinta waxaana u adeegsada boorsooyin kala duwan (boorsooyin) lagu keydiyo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Muhiimad ahaan, dayactirka guntin buuxda ayaa aad uga duwan sidii loo ilaalin lahaa guntin macdanta oo dhan. In kasta oo macdan qodayaashu ay tahay inay maal gashadaan lacag iyo ilo si ay u iibsadaan una isticmaalaan qalab aad u qaali ah iyo softiweer (xusuusnow inta ay dadku ka cabanayaan korontada loo adeegsado in lagu qodo bitcoins), qof kastaa wuu ilaalin karaa node ansax ah oo buuxa. Xaqiiqdii, iyada oo aan la helin guntinta ansaxinta buuxda, macdan qodaha waxba ma qaban karo: ka hor inta uusan isku deyin miino baarista, macdan qodaha waa inuu ka helaa ok noodh buuxa, kaas oo caddeeya oo xaqiijinaya macaamillada la sugayo. Marka markaa macdanta ayaa abuuri karta baloog lagu dalbaday in lagu martigaliyo macluumaadkaas (koox macaamil ah) iskuna dayo inuu miino baarka. Halkan xannibaadda ayaa mar kale la cusbooneysiin doonaa: haddii macdanta ay maamusho si ay u hesho xal sax ah oo ku saabsan xannibaadda hadda waxaa loo gudbin karaa inta kale ee xannibaadda iyo noodhadhka buuxa ayaa xaqiijinaya ansaxnimadiisa. Ugu dambeyntiina, sharciyada oggolaanshaha waxaa go'aamiya oo dammaanad qaada shabakadda la qaybiyay ee ansaxinta noodhadhka, kama iman macdan qodayaasha.
Noodhadhka Bitcoin waxay ku wada xiriiraan midba midka kale iyada oo loo marayo borotokoolka shabakadda P2P Bitcoin iyo si isdaba joog ah ula xiriirta midba midka kale, waxay damaanad qaadayaan sharafnimada nidaamka. Kawaran haddii uu jiro gunti aan si wanaagsan u dhaqmin, oo si aan daacad ahayn u dhaqanta, taas oo ah mid xun, oo isku dayda in ay faafiso macluumaad qaldan? Xayiraadaha, macluumaadka ayaa qulqulaya: noodhkaas waxaa si dhakhso leh u aqoonsaday noodhadh daacad ah isla markaana si dhakhso leh ayaa looga jaray shabakadda.
Immisa ayaan ku kasban karaa aniga oo ilaaliya node buuxa oo ansax ah ??
Cazoo! Abaalmarin dhaqaale lama siinayo: waxaa go'aamiya kalsoonida dadka isticmaala, waxay siisaa degganaan maskaxeed, nabadgelyo, asturnaan adeegsadayaasha. Noodhadhka buuxa waa garsoorayaasha ciyaarta dhabta ah: waxay cadeynayaan in sharciyada la raacay. Waxay ka ilaaliyaan xannibaadda weerarada iyo khayaanada (sida laba-kharash garayn) mana aha inay aaminaan cid kale.
Maqaalka horeBinance Coin (BNB): Astaamaha asalka u ah isweydaarsiga ugu weyn adduunka ee 'crypto'
Maqaalka xigtaTaariikhda Blockchain